नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अमेरिकामा ईतिहासकै लामो सरकार शटडाउन, राष्ट्रपती ट्रम्प र सभामुख पेलोसीको द्वन्द छताछुल्ल !
अमेरिकामा ईतिहासकै लामो सरकार शटडाउन, राष्ट्रपती ट्रम्प र सभामुख पेलोसीको द्वन्द छताछुल्ल !
अमेरिकामा ईतिहासकै लामो सरकार शटडाउन त जारी छ नै त्यस माथि राष्ट्रपती ट्रम्प र सभामुख पेलोसीको राजनीतिक द्वन्द सडकमा समेत छताछुल्ल भएकोछ । सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पले बिपक्षी डेमोक्रेटिक नेत्री एबम नब निर्बाचित सभामुख न्यान्सी पेलोसीलाई बिदेश भ्रमण निस्किनै लागेका बेला तयार सैनिक जहाज दिन अस्विकार गरेका छन । राष्ट्रपति ट्रम्पले हाउस स्पीकर न्यान्सी पेलोसीलाई युद्धक्षेत्रको भ्रमणका लागि सैन्य जहाज दिन अस्वीकार गरेका छन् । पेलोसी विहिबार दिउसो अफगानिस्तान, इजिप्ट र ब्रसेल्स जाने तय भएको थियो ।
भ्रमणमा जानुभन्दा एकघण्टा अगाडि ट्रम्पले पेलोसीलाई सैन्य जहाज दिन अस्वीकार गर्दै भ्रमण स्थगित गरिदिएको अमेरिकी संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । पेलोसीले ट्रम्पलाई सरकार शटडाउनका कारण स्टेट अफ द युनियन सम्बोधन स्थगित गर्न आग्रह गरेको भोलिपल्टै ट्रम्पले पेलोसीको भ्रमण स्थगित गराएका छन् । ट्रम्पले लेखेको पत्रमा शटडाउनका कारण आफूले पेलोसीको अफगानिस्तान, ब्रसेल्स र इजिप्टको भ्रमण स्थगित
गराउनुपरेको उल्लेख गरिएको छ । शटडाउन सकिनासाथ भ्रमणको तालिका पुन तय गरिने समेत ट्रम्पले जनाएका छन् । ट्रम्पले पेलोसीलाई कमर्सियल जहाजमा चढ्न समेत सुझाव दिएका छन् । यदि कमर्सियल जहाजमा चढेर भ्रमण गर्ने हो भने त्यो पेलोसीको अधिकार रहेको ट्रम्पले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । पेलोसीको भ्रमणको उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खट्नेहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु रहेको थियो । शटडाउनको अन्त्यका लागि छलफल गर्नका लागि पेलासी वासिंटनमा रहनु उपयुक्त हुने ट्रम्पले जनाएका छन् ।
Posted by www.Nepalmother.com at 5:18 PM